Faah faahin:- Qarax waxyeelo geystay oo gelinkii dambe maanta Muqdisho ka dhacay - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax waxyeelo geystay oo gelinkii dambe maanta Muqdisho ka dhacay
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo gelinkii dambe maanta ka dhacay agagaarka taaladda Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxaasi oo ilaa iyo haatan aan la ogeyn halka uu bar-tilmaameedkiisa ahaa ayaa sida la sheegay ahaa mid loo adeegsaday gaari noociisu yahay kuwa raaxadda ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaas oo kadib ku qarxay xilli uu maraayay inta u dhaxeeysa wasaaradda caafimaadka iyo taaladda Daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku geeriyootay ilaa 4 qof uu ku jiro ruuxii qaraxa fuliyay, iyadoona 6 qof kale ay ku dhaawacantay, sida ay inoo xaqiijiyeen dad goob-joogayaal ah oo ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay.
Gaadiidka gurmadka deg-dega ah ee Ambalaasta oo islamarkiiba goobta soo gaaray ayaa halkaasi ka qaaday dadkii ku dhaawacmay qaraxa, waxaana dhamaan dhaawacyadaasi la geeyay xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa goobtaasi soo gaaray gaadiidka dab-damiska oo ugu dambeyn ku guuleystay daminta dabka ka dhashay qaraxa.
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka iyo kuwa booliska oo goobta soo gaaray ayaa xiray dhamaan wadooyinka soo gala goobtaas, iyagoona kadib halkaasi ka sameeyay baaritaano dheeraad ah oo ay ku ogaanayaan sida ay wax u dhaceen.
Dhinaca kale, ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi, waxaana inta badan qaraxyadda ceynkaan oo kale looga bartay inay magaalada Muqdisho ka geystaan Xarakada Al-shabaab.